Kutengesa Vhidhiyo Matipi kubva kuImba Hofisi | Martech Zone
Nedambudziko razvino, vashandi vebhizinesi vari kuzviwana vari vega uye vachishanda kubva kumba, vachizendamira pamavideo nzira dzemisangano, kutengesa mafoni, uye misangano yetimu.
Ndiri kuzviparadzanisa kwevhiki inotevera sezvo shamwari yangu yakafumurwa kune mumwe munhu akaedzwa aine COVID-19, saka ndakafunga kuisa pamwechete matipi ekukubatsira kuti uwane nani vhidhiyo seyako yekutaurirana svikiro.
Kumba Hofisi Vhidhiyo Matipi
Nekusava nechokwadi kwehupfumi, iwe unofanirwa kuve unonzwira tsitsi kumatambudziko etarisiro yega yega uye mutengi. Iwe unofanirwa kuve unovimba sosi yerubatsiro kune ese tarisiro uye mutengi. Yenguva refu-nzira nzira dziri kunyanya kufuratirwa semakambani anovhima pasi uye kufunga zvine hungwaru. Vhidhiyo inzira yekukunda mimwe yematanho ekumusoro atinawo nekubatana kwevanhu, asi iwe unofanirwa kukwidziridza chiitiko ichocho zvakare.
Zvevhidhiyo, unoda mindset, iyo logistics, mameseji zano, uye mapuratifomu ekuwedzera kubatanidzwa uye kukanganisa kweshoko rako.
Kusurukirwa, kushushikana, uye kusava nechokwadi zvinogona kukanganisa maitiro atinoonekwa. Hezvino zvinhu zvaunogona kuita kunatsiridza yako wega pfungwa pamwe nemabatirwo aunoonekwa nemuoni wako.
Kuonga - Usati wawana pavhidhiyo, fungisisa pane izvo zvaunotenda nazvo.
kusimbisa muviri - Isu hatinyanyi kufamba. Tora kurovedza muviri kuchenesa musoro wako, kubvisa kushushikana, uye kuvaka endorphins.
Kupfeka kweKubudirira - inguva yekugeza, kuveura ndebvu uye kupfeka kuti ubudirire. Izvo zvinoita kuti iwe unzwe uine chivimbo uye wako anogamuchira achawana iwo akanyanya fafitowo zvakare.
Mamiriro - Usamira pamberi pemadziro machena. Hofisi ine humwe hudzamu uye ivhu repasi kumashure kwako unenge uchikoka zvakanyanya nemwenje unodziya.
Imba Hofisi Vhidhiyo Logistics
Deredza chero nyaya iwe yauchazove neyekuteerera mhando, vhidhiyo mhando, kukanganisa, uye nekubatanidza nyaya. Buda hofisi yangu yekumba kuti uone zvandakaisa mari mairi uye kuti zvinoshanda sei.
Hardwire - Usavimbe neWifi yevhidhiyo uye odhiyo, mhanyisa tambo yenguva pfupi kubva kune yako router kune yako laptop.
rira - Usashandise vatauri vekunze kuteerera, shandisa earbuds.üAudio - Audio ndiyo kiyi, tora maikorofoni yakakura kana shandisa maikorofoni yako we headset kudzikisa ruzha rwemashure
Kufema & Tambanudza - Shandisa diaphragmatic kufema pamberi pevhidhiyo yako kuti usafe nenzara ye oxygen. Tambanudza musoro wako nemutsipa usati watanga.
Kutarisa Kwameso - Isa kamera yako kana pamusoro pezinga reziso uye wotarisa kamera mukati mese.
Kuvhiringidzika - Dzorera zviyeuchidzo pafoni yako uye pakombiyuta.
Bhizinesi Vhidhiyo Kukurukurirana Matanho
Vhidhiyo inzira ine simba, asi iwe unofanirwa kuishandisa nesimba rayo kuitira kuti ugone kubata zvakanyanya.
Brevity- Usatambise nguva yevanhu. Dzidzira izvo zvauchazotaura uye svika wakananga kunongedzo.
tsitsi - Kusaziva mamiriro emunhu anotarisa, ungangoda kudzivisa kuseka.
Ipa Kukosha - Mune dzino dzisina chokwadi nguva, iwe unofanirwa kupa kukosha. Kana iwe uri kungoedza kuita kutengesa, iwe uchave unofuratirwa.
Goverana Zviwanikwa - kune rumwe ruzivo apo muoni wako anogona kuzviongorora zvakadzama.
Govera Rubatsiro - Ipa iwo mukana kune wako wekutarisira kana mutengi kutevedzera. Uku hakusi kutengesa!
Mhando dzeVhidhiyo Mapuratifomu
Webinar, Musangano uye Mapuratifomu eMusangano - Zoom, Uberconference, uye Google Hangouts ese makuru musangano musangano we1: 1 kana 1: Misangano mizhinji. Ivo vanogona zvakare kunyorwa uye kukwidziridzwa kune vakawanda vateereri.
Zvemagariro Media Kurarama Mapuratifomu - Facebook neYouTube Live zvinonakidza zvemagariro mapuratifomu ekugovana nevateereri vakawanda.
Kutengesa & Email Vhidhiyo Mapuratifomu - Loom, Dubb, BhombaBhomba, Covideo, OneMob inogonesa iwe kuti pre-rekodhi neako skrini uye kamera. Tumira mifananidzo muemail, yambiro, uye ubatanidzwe neCRM yako.
Vhidhiyo Kubata - Youtube ichiri chechipiri injini yekutsvaga! Chiise ipapo uye chiwedzere. Vimeo, Wistia, uye mamwe mabhizimusi mapuratifomu akasarudzika zvakare.
Social Media - LinkedIn, Twitter, Instagram zvese zvinokutendera kuti ushandise nzira dzako dzese dzekugovana nekusimudzira mavhidhiyo mumafomati avo eko. Chenjera kuti puratifomu yega yega ine zviyero pahurefu hwevhidhiyo yako.
Ndinovimba izvi zvinopa rubatsiro apo iwe uchishanda nevhidhiyo kubva kumba mudambudziko iri!
Tags: google hangoutshome officeKushambadzira Webinarvideo conferencevhidhiyo pfungwamapuratifomu evhidhiyovhidhiyo zanomatipi evhidhiyovhidhiyo manomano
Appy Pie App Inovaka: Mushandisi-Shamwari, Kwete-Kodhi App Kuvaka Platform